Fizahana ny vatana mangatsiakan’i Alana Cutland Andrasana ny vaovaon’ny hopitaly HJRA
Miandry fatratra ny fampitam-baovaon’ny HJRA mahakasika ny fizahana ny sisan-taolan’ilay tovovavy anglisy ny mpanara-baovao eto an-toerana sy maneran-tany.
Nigadona teo amin’ny hopitaly HJRA omaly antoandro, sahabo tamin’ny 11 ora latsaka, ny sisan-taolan’io teratany britanika io, Alana Cutland izay nitsambikina teny ambony fiaramanidina, raha ny fampitam-baovaon’ny zandary eo Ankadilalana. Voaraka avokoa ny kipitsopitson’ny fahazoana alalana tamin’ireo manampahefana amin’ny fitaterana ana habakabaka nahafahana nitondra ny razan’ity mpianatra teratany vahiny ity tamin’ny alalan’ny angidimby. Tamin’ny fotoana niantsoana ny tompon’andraikitry ny seraseran’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Alexandre Ratolojanaharimanana dia teo am-panaovana ny fizahana ny razana tanteraka ny mpitsabo sy ireo mpandraharahan’ny tranompatin’ny hopitaly eo Ampefiloha. Aorian’izao « autopsie » izao dia omena ny fianakaviana ny razana ary atolotra ny Masoivohon’ny firenena britanika sy ny Fitsarana Port-Bergé ny taratasin’ny mpitsabo ho famenon’ireo antontan-taratasin’ny famotoran’ny mpitandro filaminana.